တောင်ပေါ်သားတို့ရဲ့အောင်ပန်းမြို့ကဈေးကလေး………………….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » တောင်ပေါ်သားတို့ရဲ့အောင်ပန်းမြို့ကဈေးကလေး…………………..
1 ဒီမြင်းလှည်းလေးက အောင်ပန်း ဘူတာရုံနားက ဈေးလေးကို သွားမှာလေ
2 အောင်ပန်းမြို့ ကမြင်းလှည်းဂိတ်ကလေး
3 ဈေးရောင်းဘို့မနက်စောစောသွားတဲ့ ပအိုဝ်တိုင်းရင်းသူ
4 အောင်ပန်းဈေးထဲသွားတော့ ရောင်းဘု့ိချထားတဲ့သစ်ခွပန်းအုံ
5 ဒါကလဲ သစ်ခွပန်းခိုင်လေးပါဘဲ ရောင်းဘို့ ချိတ်ထားတာ
6 ရောင်းဘို့ချိတ်ထားတဲ့ သစ်ခွပန်းခိုင်လေးပါ
7 ဝယ်ပါအုံးလား ရှမ်းပဲပုတ်.....................
8 ရောင်းတော့ရောင်းနေတာဘဲ ဘာတွေရောင်းလဲတော့မသိဘူးနော်
9 ဧည့်သည်ဈေးသည် ဆိုတော့ မြေကြီးပေါါ်မှာထိုင်ရောင်း နေပူလဲ ပူပေ့စေတော့
10 ရှိတာလေးလာရောင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသူ ဈေးသည်လေးတွေ
13 ဆိုင်မရှိတော့လည်းသူများဆိုင်ရှေ့ တောင်းပန်ပြီးထွက်ရတာပေါ့
14 မလုံပေမယ့် အပူတော့ နည်းနည်းသက်သာတာပေါ့နော်
15 ဝယ်ပါအုံးရှင့် ........ငရုတ်သီးနီနီရဲရဲ လှလှ
16 ရောင်းသူဝယ်သူ အသံတူ
17 အဝေးပြေးကားဂိတ်နားက ဈေးသည်လေးတွေ
18 စားအုံးမလားဗျ ပေါက်စီပူပူနွေးနွေး
ညနေမှာတော့ ဈေးက သိပ်မစည်ပါဘူး။
နောက်နေ့မနက်ကျနော် လမ်းလျောက်ထွက်တဲ့အခါ မြို့အနောက်ပိုင်းကို လျျောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်လမ်းလျောက်ထွက်တဲ့ မနက်ဝေလီဝေလင်းမှာ ဈေးရောင်းသွားကြမယ့်ဈေးသည်လေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဈေးကြီးကတော့ အောင်ပန်း-ပင်းတယလမ်းရဲ့အပေါ်ဘက် တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိတာပါ။
ကျနော်ရောက်တဲ့ရက်က တော့ ဈေးနေ့ဖြစ်နေတော့ဈေးထဲမှာ တိုင်းရင်းသားဈေးသည်လေးတွေ
နောက်ပြန်ခါနီးရက်မှာတာ့ ဈေးတန်းလေးဖြစ်နေတဲ့ ကားရပ်နားစခန်းနားမှာရှိတဲ့ဈေးသည်လေးတွေကိုလည်း
လှတာမလှတာ အပထားသူတို့လေးတွေဘာရောင်းနေကြတယ်ဆိုတာ သိအောင်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ.်။
အန်တီက သများအတွက် သစ်ခွတွေလည်း ဝယ်မလာဘူး
အခု ချစ်ရင်ထူးပြောတဲ့ ဈေုးသည်ခေါင်းစဉ်ကို အန်တီပုံတွေနဲ့ဝင်ပြိုင်အုန်းမယ်
သများ ကင်မတာ ပျက်နေလို့
မောင်ပေ ငယ်တုန်းက နွေရောက်တိုင်း ကလောက အဘိုးအိမ်မှာ။ ဈေးနေ့ရောက်ပြီဆိုရင် မြို့အနီးနားက ဈေးသည်တွေဟာ ရောင်းကုန်တွေနဲ့အတူ မနက် အစောကြီးကတဲက လမ်းလျှောက် လာကြတယ်။ အဲ့မှာ ပအို့မ ဈေးသည်တွေလဲပါတယ်။ သူရို့တွေ အပေါ့သွားရင် အိမ်ရှေ့က ခြံစည်းရိုးကဖြစ် ရှိနေတဲ့ ခြုံတွေနားကပ်ပြီး မတ်တပ်ရပ် သွားကြတာကလား။
လေးပေါက် အပေါ်ဆုံးက မြင်းလှည်းပုံလေး ကူးသွားတယ်နော်… Desktop ပေါ်တင်ထားမလို….
ရှမ်းပြည့်က ဈေးလေးတွေက ဝယ်ရတာ အရမ်းကောင်းမဲ့ပုံပဲနော်……
ကျုပ်လဲ အောင်ပန်း ကလော တောင်ကြီး ရောက်ဘူးတယ်
ဒါပေမဲ့ အဲဒီတုန်းက ကင်မလာကမရှိသေး…ကြည့်ရတာ ဈေးသယ်တွေကို
ဘယ်ဟုတ်မလဲ အလစ်ကပ်ရိုက်တာ ကိုမိုက်ရဲ့။
ကျနော်က ရိုက်ရင် ဇွမ်းသုံးခဲတယ်။
ကိုပေါက်ရေ နံပါတ်(၁၇)ပုံလေးထဲက ဈေးသည်လေးတွေ. ပုံကျနော်လဲ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။
ပုံတင်ဖို ့လိုင်းစောင့်နေတာ တစ်လပြညိ့ပါတော့မယ်
ကိုပေါက် ခရီးသွားနေသည် ဆိုတဲ့ .. ဇာတ်ကားတစ်ကားတော့ ရိုက်လို့ ရပြီ လေးပေါက်ရေ … ။
သမီးတို့လို တစ်နေကုန် ကွန်ပျူတာထဲ ခေါင်းစိုက်နေသူတွေအတွက် .. တနှစ်လုံးနေလို့တောင် တစ်ခါ ခရီးမထွက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ … ။ နောက်ပြီး … သူများ အလုပ်လုပ်နေရတာမို့ .. ခွင့်ယူချင်တာတောင် … ယူလို့ မရတာမျိုး .. ဒါကြောင့် ဘယ်မှ ဟုတ်တိပတ်တိ မသွားဖြစ်ဘူး .. ။
အခုလို နေရာဒေသတွေ ၊ ရှုခင်းလေးတွေအကြောင်း မြင်ရတာ … ကွန်ပျူတာထဲကနေ .. ခရီးထွက်လိုက်သလိုပါပဲ .. ဗဟုသုတလည်းရသလို .. ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတွေကိုလည်း ရောက်ရလို့ ကျေးဇူးပါ လေးလေးရေ … ။ အောင်ပန်းကို ဖြတ်ပဲ သွားဖူးတာ … မလည်ပတ်ဖူးဘူး … ။
ဓာတ်ပုံပြပွဲအမီ ဈေးသည် ပုံများ ဖြစ်ပေသည်တစ်မုံ ့
အဲဘက်မှာ ငြုပ်သီးတော့ အတော်ပေါပုံရတယ်နော
အောင်ပန်းကပုံတွေရိုက်ထားတာ အများကြီးထဲက တစ်ကန့်စီထုတ်တင်ပေးလိုက်တာပါ.
ဈေးသည် ပြပွဲမလုပ်ခင်ကတည်းက ဒီဈေးသည်လေးတွေရဲ့ပုံက တင်ဘို့စီထားပြီးသားလေ
ဪ ကိုပေါက်တို့များ ရိုးရာဓလေ့၊ ရိုးရာ အဝတ်အစားတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို
တွဲဖက် ဖေါ်ပြတတ်ပါပေတယ် …
ရောက်ဖူးတယ်ရှိအောင် သွားရပါဦးမယ်… အေးမြတဲ့ ရာသီဥတု ကိုလဲ ခံစားကြည့်ချင်ပါတယ်…။
ပထမတစ်ခေါက်က ဈေးနေ့နဲ့ မဆုံလို့ မရိုက်လိုက်ရတာကို အတိုးချပြီးရိုက်လာခဲ့ပါတယ်။
အောင်ပန်းက နေကတော့ ပူတယ်။
မန်းလေးသားကျနော်အောင်ပန်းရောက်တော့ အေးတယ်ဆို ပျော်နေတာ။
အောင်ပန်းကလူကတော့ ပူလို့ မနေနိုင်ဘူးတဲ့ဗျာ။
ပုံ(၆) သစ်ခွကိုတောင်းကြီးဖြုတ်ပြီး ပန်းအနီးကပ်ကူးပေးပါနော်။
လေးပေါက်ရေ မြန်မာပြည်အနှံ့ခရီးထွက်ရင် ဓါတ်ပုံလေးရိုက်နိုင်နေတဲ့လေးပေါက်ကို အားကျလိုက်
တာ။ အောင်ပန်းဈေးလေးကို ကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းမဲ့ပုံနော်။ သစ်ခွပန်းတွေ ယူသွားမယ်နော်
အောင်ပန်းဈေးက အခု သင်္ကြန်အပြီးမို့သိပ်မစည်ဘူးပြောတယ်။
တိုင်းရင်းသားအစုံကြည့်ချင်ရင် သင်္ကြန်မတိုင်ခင်လာခဲ့လို့မြို့ခံတွေက မှာလိုက်ပါတယ်။
ကိုင်း ရွာသူားတွေစုပြီး သွားလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။
လွိုင်ကော်အသွားလမ်းက ပအိုဝ့်မလေးတွေက ပိုချောတယ်ဗျ၊
ဒီအထဲမှာတင်တဲ့ပုံတွေကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ယူလို့ရပါ၏။
အားပေးနေပါတယ် လေးပေါက်ရေ လုံ့လစိုက်ထုတ်နိူင်မှု အားကိုတော့ လေးစားအပ်ပါကြောင်း..
ကိုယ်တိုင်လည်း အောင်ပန်း ရောက်ဖူးတာပဲ။
ကိုပေါက်လို လှတပတ မမြင်တတ်တော့ ရိုက်စရာကို မရှိခဲ့ဘူး။
ကျနော်ကတော့ တစ်နေရာရောက်ရင် ကျီးကန်းတောင်းမှောက်လိုက်ကြည့်တာ အကျင့်ပါနေပြီဗျာ။
ကျီးကန်း တောင် တောင်းမှောက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့